Helida kaalmada dhimirka ee dhalinyarada | Suomen Mielenterveysseura
Xiliga dhalinyaranimadda dhibaatooyinka dhinaca fikirka ama dhimirka la xiriira waa kuwo caadi ah ama lala kulmo. Waxaa la qiyaasaa in hal shantii dhalinyarada ay la kulmaan dhibaato sharaf darro, dareemid ciriiri, ama xanaaq badan, kaasoo dhibaato u keena xiriirka qofka dhalinyarada ah iyo qoyskooda, kan saaxiibadda, dhinaca waxbarashadda iyo hiwaayadaha kala duwan.
Badanaa dareenkan dhibaatada nolosha waa mid laga gudbo kuna eg xiliga dhalinyaranimada. Sidaas darteed waalidka iyo qaraabada way ku adagtahay in ay qiyaasaan xiliga ay haboontahay in ay caawimo meel kale raadsadaan.
Niyadjab, xanaaq badan, cunto xumo, dhibaato qoyska ku timaadda ama dhibaato ka jirta dhinaca waxbarashadda ayaa ah arrimaha badanaa dhalinyaradu u aadaan latalinta caafimaadka dhimirka. Waxaa wanaagsan in la bilaabo dalab caawimo, marka qofka dhalinyarada ah laga arko isbedel laga welwelo waqti dheer tusaale dhowr todobaad. Waxaa ah sababo markaasba caawimo lagu raadin karo haddii qofku ku fikirayo ishalaagid ama uusan qumaneyn.
Qofka dhalinyarada ah ee iskoolka dhigta meesha koowaad ee uu ka heli karo daryeel waa gudiga caafimaadka iskoolka ama xarunta caafimaadka deegaanka. Xarunta caafimaadka iskoolka qofka dhalinyarada ahi wuxuu la kulmi karaa kal-kaaliyaha caafimaadka iskoolka, takhtarka iskoolka, lataliyaha caafimaadka dhimirka iskoolka ama kuxigeenka maamulaha iskoolka. Haddii loo baahdo takhtarka iskoolka (xarunta caafmaadka ama takhtarka sida qaaska ah loo leeyahay) markaas waxaa qofka dhalinyarada ah loo diri kara caafimaadka dhimirka dhalinyarada.
Haddii dhibaatada qofka dhalinyarada ah ay u baahantahay daryeel isbitaal, waxaa loo dirayaa qeybta latalinta dhimirka. Qeybta latalinta caafimaadka dhimirka qofka dhalinyarada ah baadhitaan ayaa lagu sameynayaa si loo ogaado nooca dhibaatada haysa, waxaana loo sameynayaa qorshe daryeel. Xilliga baadhitaanka qofka dhalinyarada ah isbitaalka ayaa la dhigayaa.
Daryeelka isbitaalka badanaa waxay qaadataa dhowr todobaad kadibna dabiidibu dibedda ayey qofka ugu soconeysaa. Haddii loo baahdo daryeelka isbitaalku wuxuu socon kartaa waqti dheer ama wuxuu noqon karaa daryeelka dibeda lagu qaadanayo iyo kan isbitaalka midba mar. Dayeelka waxaa lagu qorsheeyaa baahidda qofka dhalinyarada ah sidoo kale baahidda qoyska oo idilna waa la tixgaliyaa.